Xiddig lagu xardhay magaca Trump oo loo codeeyay in la fujiyo - BBC News Somali
Duqa magaaladan ayaa sharaxaya sababta keentay codeynta "In aad hesho xiddiga caanimada ee Hollywood Walk of Fame waa sharaf weyn, marka uu qofka liidayo dadka laga tirada badanyahay, muhaajiriinta iyo muslimiinta, dadka curyaamiinta ah iyo dumarka, waa in sharaftaas laga xayuubiyaa" ayuu yiri John Duran.
Balse dhibka jira ayaa ah in maamulka dowladda hoose aysan lahayn go'aanka xiddiga meeshaas lagu dhajinayo iyo kan laga fujinayo, waxaana go'aanka leh Rugta Ganacsiga Hollywood, duqa magaaladana wuxuu leeyahay "iyaga ayay u taalaa".
Qof kasta ayaa soo jeedin kara in qof jila aflaamta ama heesa magaciisa lagu dhajin karo dariiqa, balse waqti aad u dheer ayay qaadataa inta go'aan laga gaarayo.
Image caption Xiddiga Trump ayaa la dhajiyay sanadkii 2007
Image caption Atoore Jeff Goldblum ayaa ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyay ee xiddigta heley
Xiddiga Charlie Chaplin oo jilli jiray aflaanta juuq la'aanta ah ee majaajilada ayaa ugu dambeyntii la dhajiyay sanadkii 1972-dii.
Halka jillaaga mala awaalka ah ee Mickey Mouse, ee aflaamka kaartoonka carruurta uu yahay kan kaliya een bini'aadamka ahayn ee xiddig halkaas loogu dhajiyay.